Naannoo Amaaraatti karoora bakkeewwan barbadaa’an deebisanii ijaaruuf ta’u qopheessuuf qorannoon taasifamaa jira - ዜና ከምንጩ
Naannoo Amaaraatti karoora bakkeewwan barbadaa’an deebisanii ijaaruuf ta’u qopheessuuf qorannoon taasifamaa jira
Bajata naannichi gara waraanaatti naannesse mootummaan federaalaa akka bakka buusuuf karoorfameera.
Mana maree bakka bu’oota uummataatiin shororkeessummaatti kan murtaa’e gareen Adda Biliisummaa Uummata Tigiraay (ABUT) bakkeewwan naannoo Amaaraatti weerare deebisanii bayyanachiisuuf kan dandeessisu karoora deebisaanii ijaaruu qopheessuuf qorannoo guutuun geggeeffamaa jiraachuun ibsameera.
Waraanni kutaa kaabaa ka’umsi isaa naannoo Tigiraay ta’e gara naannolee Amaaraa fi Affaaritti babal’achuu isaa hordofuun, gareen ABUT bakkeewwan weeraruun qabatetti kan argaman qabeenyaa mootummaa fi dhuunfaa barbadeessuu fi saamuu isaa odeeffannoowwan hanga yoonaatti bahan ni mul’isu. Tarkaanfii deebisanii waraanuu mootummaan eegaleen gareen ABUT bakkeewwan weeraree ture gad-lakkisuun bahuu isaa mootummaan beeksiseera.
Kanannis gareen ABUT bakkeewwan weeraraan qabatee ture gadhiisee bahuu isaa hordofuun; mootummaan naannichaa bakkeewwan barbadaa’an deebisanii ijaaruuf garee bal’inaan qoratu hundeessuun hojiitti galchuu isaa qaamoleen garichatti hirmaatan Addis Maaledaatti ibsaniiru.
Karoorri deebisanii ijaaruu qorannoo taasifamu kana bu’ureeffate erga qorannichi xumuramee booda atattamaan qophaa’ee gara hojiitti akka seenus eerameera. Karoora deebisanii ijaaruu qorannicha irratti bu’ureeffachuun qophaa’u irratti adeemsa dhaabbilee barbadaa’an deebisanii ijaaruu keessatti baasiiwwan barbaachisan keessaa mootummaan federaalaa fi kan naannichaa kan baasanu ni jiraata jedhameera.
Bal’ina bakkeewwan weeraraan qabamanii barbadaa’aniitiin kan ka’e adeemsa deebisanii ijaaruu keessatti dhaabbilee mootummaa fi dhuunfaa barbadaa’an bakka turanitti deebisuuf maallaqnii fi yeroon barbaachisu bal’aa ta’uu akka danda’u ammumaan ibsamaa jira. Kanaanis karoorri deebisanii ijaaruuf qophaa’u dhaabbileen tajaajila bu’uuraa kennan atattamaan bakka turanitti akka deebifaman kan taasisuu fi dhaabbileen yeroo gabaabaa keessatti ijaaramuu hindandeenye immoo adeemsaan deebisanii ijaaruuf kan dandeessisu ta’uun isaa himameera.
Gareen ABUT kutaalee naannichaa adda addaatti weerara raawwachuu isaa hordofee; weeraricha qolachuuf mootummaan nannichaa waamicha atattamaa labsuu isaa fi dhaabbilee tajaajila kennanuun alatti manneen hojii mootummaa hojii akka dhaaban taasisuun bajata naannichaa gara waraanichaatti naannessuu isaa akka ibsee ture ni yaadatama.
Murtee mootummaan naannichaa murteesse ka’umsa godhachuun dhaabbilee tajaajila bu’uraa kennu jedhaman kanneen akka faayinaansii, eleektiriikii, bishaanii fi kanneen kana fakkaataniin alatti bajati jiru duula waraanichaatti naanna’eera jedhameera. Dabalataanis naannichi bara bajataa kanatti hojiiwwan dirree daraan barbaachisaa ta’aniin alatti hojiif dirreetti bobba’uunii fi hojiiwwan durgoon itti kaffalamu akka dhorkaman taasiseera.
Kanaanis mootummaan naannichaa bajata bara 2014 baasii idileetiif qabate waraanaaf oolchuu isaa hordofuun; baasii waraanaaf baase haala mootummaan federaalaa bakka ittiin buusu irratti naannichi kan hojjetu ta’uun eerameera. Naannichatti dhaabbilee mootummaa barbadaa’an gara hojiitti galchuu fi deebisanii ijaaruuf bajata akka barbaachisus ibsameera.
Bakkawwan waraanichaan barbadaa’an deebisanii ijaaruuf tattaaffii taasifamuun dhaabbilee mootummaa tajaajila bu’uraa kennan gara hojiitti galchuun barbaachisaa yoo ta’es; bakkeewwan weerarichaan barbadaa’an godinaalee hanga aanaalee fi bulchiinsa magaalotaatti bajata waan hinqabneef bajanni dabalataa mootummaa naannootiin akka kennamuuf ni barbaadu jedhameera.
Naannichi bara bajataa kanatti bakkeewwan weeraraan qabamanii turan irraa galii walitti qabuun irra ture walitti qabuun akka hindanda’amin kan ibsame yoo ta’u; bakkeewwan kun galii naannichaatiif qooda olaanaa qabu turan jedhameera.
Naannoon Amaaraa bara bajataa 2014tti bajanni isaa birrii biliyoona 80.1 yoo ta’u, birriin biliyoonni 43 mootummaa federaalaatiin kan ramadameef ture. Naannichi bajata hafe galii taaksii, misooma ful’aa fi liqii alaatiin kan guuttatu yoo ta’u, birrii biliyoona 34.1 galii taaksii irraa argachuuf yoo karoorfates; bakkeewwan garee ABUTn weeraraman keessaa galiin gibiraa walitti hinqabamne.
አዲስ ማለዳ 16 Muddee 2014 No 27
Total views : 7512228